किन बोलाए प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बैठक ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ समाचार राजनीति किन बोलाए प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बैठक ?
किन बोलाए प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बैठक ?
२३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारबाट हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणबारे सुझाव लिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेका छन् । उनले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत र विज्ञहरुसहित बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठक आज बिहीबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ । विदेशी राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने प्रचलन छ ।
छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार नेपाल आउँदैछन् ।
अघिल्लो लेख‘महरा यौन काण्ड’लाई यसरी पनि हेरौँ
अर्को लेख बाँकेमा ९८ हजार नगदसहित जुवाडे पक्राउ